Ubuhlungu ethangeni elingaphezulu: Unobangela, unyango kunye nokuthintela
18 / 06 / 2018 /0 Amazwana/i Amanqaku mfanelo/av ubuhlungu
Ngaba uchaphazeleka yintlungu ethangeni elingaphezulu? Apha unokufunda ngakumbi malunga nonobangela, unyango kunye nokuthintela kolu hlobo lwethanga lobuhlungu.
Ubuhlungu ethangeni elingaphezulu bunokubangelwa ziintlobo ezahlukeneyo zokuxilonga. Isizathu sesizathu sokuba kunokuba nzima ukufumana ukuxilongwa ngokuchanekileyo kule ndawo ye-anatomical kungenxa yokuba inemisipha eyahlukeneyo, i-tendon, i-ligaments, ukudibanisa kunye nolunye ulwakhiwo lwe-anatomical.
Ukuba unengxaki yokuvela rhoqo okanye ixesha elide kwintlungu ethangeni eliphezulu - nokuba ithambo lasekhohlo okanye lasekunene - siyakukhuthaza ukuba uqhagamshelane nogqirha ovunyiweyo esidlangalaleni (i-physiotherapist, i-chiropractor okanye i-therapist) ukuze ufumane uviwo olucokisekileyo noviwo. .
Izizathu: Kutheni le nto ilimaza ethangeni elingaphezulu?
Intlungu ephezulu yethanga inokubangelwa yimisipha, imithambo-luvo, inwebu yangaphakathi okanye amalungu. Eyona nto ixhaphakileyo kukuba kungenxa yezizathu ezisebenzayo zezihlunu kunye namalungu - ngamanye amagama ngenxa yokulayisha ngokungachanekanga ngokuhamba kwexesha (umzekelo, intshukumo encinci kakhulu, umthwalo omninzi kakhulu okanye ukuba wenze okungaphezulu kokunyamezelwa ngumzimba wakho).
Iingxaki zemisipha ethangeni
Njengoko sele kukhankanyiwe, izihlunu ziphantse zibandakanyeka, ukuya kwinqanaba elikhulu okanye elincinci, kwintlungu yamathanga. Eminye yemisipha ebandakanyeka kakhulu kolu hlobo lwentlungu ibandakanya:
-Ii-Quadriceps (isiluli samadolo-esihleli phambi kwethanga eliphezulu)
I-Hamstrings (squats-ebekwe ngasemva kwethanga)
- I-Tensor fasciae latae / iliotibial band (ibaleka ngaphandle kwethanga ukusuka esinqeni ukuya ezantsi ngaphandle kwedolo)
Ezi zihlunu zinokuchaphazeleka ngokunxiba ixesha elide kunye nokugcwala okuthe gabalala (umzekelo, ukulimala kwezemidlalo) ngaphandle komthamo owaneleyo wokumelana nomthwalo osele ukhankanyiwe ngaphambili. Ezinye zezinto eziqhelekileyo zentlungu yemisipha zibandakanya, kubandakanya:
Ukucoca umsipha: Umthwalo ngequbuliso unokubonelela ngesiseko sololongelo lobundlobongela kwimicu yemisipha. Umzekelo olungileyo woku yi-whiplash apho umntu ochaphazelekayo aphoswa phambili nasemva. Imicu yemisipha entanyeni ayikwazi ukumelana nentshukumo ngequbuliso nangobundlobongela, kwaye ke iinyembezi ezincinci ezincinci okanye "ukuzolula" kunokwenzeka kwizakhiwo ezichaphazelekayo. Emva koxinzelelo olunjalo, kuqhelekile ukuba izihlunu zenze isivumelwano- okanye ziye kwi-spasm- ukukhusela intamo ekonakaleni ngakumbi de ingqondo ifumane ukujonga imeko.
Funda: Tsala umsipha
Ukonzakala ngaphezulu: Ukulimala okugqithisileyo kunokwenzeka ukuba umsipha okanye umsipha ethangeni usetyenziswe nzima kakhulu okanye ixesha elide kakhulu- kwaye loo monakalo wenzeka kwimicu yemisipha enxulumene noko. Ukuba awuhlangabezani nokwenzakala okunjalo, banotyekelo lokudinwa lokuba mandundu - njengoko indawo ingakufumani ukuphilisa kunye nokuyifumana kwakhona.
Ukuhamba kancinci kubomi bemihla ngemihla: Kodwa awukwenzi imidlalo kwaye kunjalo, utsho? Akuncedi. Kuyinyani ukuba ukungazithambisi ngokwaneleyo okanye ukuchitha ixesha elininzi uhleli enkalweni kunokonzakalisa nezihlunu kubangele ukugula okungapheliyo, okungapheliyo.
Ukuhlala phantsi ixesha elongeziweyo kubeka uxinzelelo olungalinganiyo kumalungu kunye nezihlunu, ngakumbi okhalweni, kunye nemilenze. Ukusilela ukwenza umthambo okanye ukushukuma kuya kubangela ukuba izihlunu ziye ziba buthathaka ngokuthe ngcembe kwaye oku ngokwako kunokubangela ukuba kube nzima ukubakho kwezihlunu.
Ukucaphuka kwentliziyo okanye ukuqaqambisa iintlungu kwamanye amalungu omzimba: I-Sciatica kunye ne-sciatica yimigaqo ebonisa ukuba ezinye izinto zibeka uxinzelelo ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo kwi-nerve ye-sciatic. Kuxhomekeka apho ukucaphuka kufumaneka khona, oku kunokubangela iintlungu ezibalekayo okanye eziphuma emqolo, ethangeni, etholeni nasezinyaweni. Rhoqo iintlungu zemithambo-luvo zibangelwe kukudibana kokungasebenzi kakuhle kwamalungu kunye nezihlunu- kodwa zisenokubakho ngenxa yokonzakala kwidiski (umzekelo, ukuqhubekeka nothando lwengcambu ye-L3).
Intlungu yamathambo inokukhokelela kutshintsho olwenziweyo. Mhlawumbi ukhe wambona umntu oneentlungu zenyani eziqhwalelayo kwaye eneentlungu ezibonakalayo? Cinga ukuba le nto itshintshiweyo yenzani kwezihlunu, imisipha kunye namalungu - ewe, iyasinceda ukuba sifumane oko sikubiza ngokuba "kukugula okunyanzelekileyo", oko kukuthi ukuba uxineke izihlunu kunye neendawo ngenxa yoku kutshintshwa kokuhamba kwakhona kuba buhlungu.
Kodwa kukwakhona okunye ukuxilonga okubangela iintlungu zentsholongwane ethangeni.
I-peripheral neuropathy: Inkqubo ye-peripheral nervous inokonakaliswa okanye icaphuke. Olu hlolisiso lubonisa ukuba sinomonakalo kwizicubu zemithambo enokuthi ngenxa yazo, phakathi kwezinye izinto, izinto ezikhoyo (izihlunu kunye namajoyina), isifo seswekile, ukusebenzisa kakubi utywala okanye ukungondleki.
Iimpawu eziqhelekileyo ze-neuropathy enjalo ziinguqu ezingaqhelekanga zemvakalelo kumathanga nasemilenzeni, ezinokubandakanya ukutshisa, ukubindeka, ukudumba kunye nentliziyo eqaqambayo.
Isifo sikaBernhardt-Roth: Esi sifo sibonisa ukuba sinomonzakalo wenzala obangela ukuba uzive ulusu ngaphandle kwethanga (i-mothus kamvaalis cutaneus femoris). Ukuba le nerve yonakala emva koko umntu ochaphazelekayo unokuqaphela ukuba akukho mvakalelo ngaphandle kwethanga kwindawo ephezulu, kwaye ukuba izigulana ezichaphazelekayo zihlala zixela ukubindeka okanye ukudumba kwindawo echaphazelekayo.
Ezinye izizathu ezinokubangela iintlungu zomlenze ophezulu
Kukho ukuxilongwa okunokwenzeka kunoko sikukhankanyileyo ngasentla, phakathi kwezinye izinto, inani leengxaki zokugula okungapheliyo kunye nokufumanisa isifo samathambo kunokubangela iintlungu ezixhaphakileyo ezichaphazela i-episodic kuwo wonke umzimba-kubandakanya amathanga.
I-Fibromyalgia: Uphando lubonakalisile ukuba abo banesifo esinganyangekiyo udinwe yonyuse ubuntununtunu bentlungu kwimisipha yemisipha kunye nemisipha. Oku kuthetha ukuba zichaphazeleka ngokulula ziintlungu kwaye zihlala ziziva zomelele ngakumbi kubantu ngaphandle kolu phando.
Abantu abaninzi bathwaxwa ziintlungu ezingapheliyo ezichitha ubomi bemihla ngemihla Kungenxa yoko le nto sikhuthaza ukuba Yabelana ngeli nqaku kwimidiya yoluntu, Zive ukhululekile ukuthanda iphepha lethu le-Facebook kwaye uthi: "Ewe kuphando oluthe kratya malunga nokuphazamiseka kwemisipha". Siyathemba ukuba ukwanda kwengqwalaselo kungakhokelela kwinkxaso mali enkulu kuphando malunga novavanyo olutsha kunye neendlela zonyango.
Isifo samathambo kunye nokuqaqanjelwa: Kukho amakhulu ovavanyo lwerheumatic ezahlukeneyo. Iqela lezi zinto, kubandakanya isifo samathambo, esinokubangela ukonakala kunye nokudumba, nto leyo ekhokelela kwintlungu. Umzekelo, ukulimala okhalweni nasemadolweni kunokubhekisa kwintlungu kokubini naphantsi kweendawo ezichaphazelekayo.
Igazi elivaliweyo ethangeni: Igazi ekuthiwa ligazi emthanjeni kunokubangela iintlungu ethangeni eliphezulu nasemiphakathweni kwiimeko ezinqabileyo. Olu hlalutyo lukwabizwa ngokuba yi-vein thrombosis enzulu-imeko enokubusongela ubomi ukuba inxenye yegazi iyakhulula ize ibambeke emiphungeni, entliziyweni okanye kwingqondo. Elo gazi likhululekileyo kungxamiseko lwezonyango.
Le meko ichaphazela ikakhulu abo sele benokungahambi kakuhle kwegazi, umsi, abaneengxaki zentliziyo, bekhulelwe okanye benengxaki enkulu. Ukongeza, ukuba uhlala phantsi ixesha elide (umzekelo, iindiza ezinde), oku kungonyusa umngcipheko wokuvela kwegazi. Kucetyiswa ukuqhubeka nokuhamba, Sebenzisa iisokisi zoxinzelelo kwaye wenze imithambo yokujikeleza ukukhanya xa ukuhambo olude olubandakanya ukuhlala okuninzi.
Funda: I-9 Iimpawu zokuqala zeGazi eliXubileyo emlenzeni
Izinto ezinobungozi kwintlungu ephezulu ithanga
Njengoko kukhankanyiwe ngaphambili kwinqaku, yimeko yokuba iintlungu kwinxalenye ephezulu yethanga zinokuba nezizathu ezininzi- apho zixhaphake khona izihlunu, imisipha kunye namalungu. Kodwa kukho izinto ezinobungozi ezikunika ithuba elikhulu lokufumana ithanga elibuhlungu kwaye oku kubandakanya:
Iimeko ezinganyangekiyo zonyango (ezinje ngesifo seswekile kunye nesifo samathambo)
Ukuba awuthathi nxaxheba kwezemidlalo nakuqeqesho
Ukunciphisa ukuhamba kwegazi
Imbali yangaphambili yokulimala okanye umothuko ethangeni nasemlenzeni
Imiba yomngcipheko ke iyasasazeka- kwaye oku kufanelekile, njengoko kuchaziwe ngaphambili, kwinto yokuba ukuxilongwa okunokwenzeka kuxhaphake kakhulu.
Ukuxilongwa kweentlungu ethangeni elingaphezulu
Ke ugqirha usenza njani isifo? Ewe, konke kuqala ngokubalisa ibali ngendlela enika isiseko sophando olusebenzayo. Umzekelo, ukuba wonzakele xa wawungena kwibhola ekhatywayo yebhola ekhatywayo, amathuba aphezulu okuba luhlobo lomsipha okanye kolunye ukonzakala kwemisipha. Ke, uvavanyo lweklinikhi luya kulungelelaniswa nolu lwazi. Ukuba iintlungu zijikeleza umva ukusuka ethangeni, kuyakrokreleka ukuba oku kukucaphukisa nerve kunye nokwenzakala kwe-disc (umzekelo, i-lumbar prolapse).
Isifundo esiqhelekileyo sezonyango siya kujongeka ngolu hlobo:
Ukuthatha iMbali (Imbali)
Uvavanyo lweklinikhi (kubandakanya uvavanyo lokuhambahamba, ukuvavanywa kwemisipha, uvavanyo lwe-neurological and test orthopedic)
Ukucela iimvavanyo ezizodwa- umzekelo ukujonga isifo (ukuba kukho imfuneko)
Unyango lwentlungu ephezulu yamathanga
Kukho iintlobo ezininzi zonyango ezinokukunceda ngeentlungu zethanga-sicebisa indlela edibanisa unyango lomzimba kunye nokuthamba ngokuthe ngcembe.
Njengoko sele kukhankanyiwe, sihlala sicebisa ukuba uviwo olucokisekileyo lusezantsi kwesicwangciso sonyango. Iindlela eziqhelekileyo zonyango eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ezo ntlungu zezi:
ukuyifundisa: Unyango lwe-physiotherapist unokukunceda ngezihlunu ezenzakeleyo nezonakalisiweyo ngohlobo lokuzilolonga kunye nonyango lomzimba
Unyango lweNaliti ye-Intramuscular Therapy / Unyango lweMisipha: I-acupuncture ye-intramuscular inokuba negalelo ekuphuculeni ukusebenza kwemisipha kunye nokunciphisa iintlungu zemisipha. Olu hlobo lonyango kufuneka lwenziwe ngugqirha ovunyiweyo esidlangalaleni- obandakanya ugqirha wezonyango, i-physiotherapist okanye i-manual therapist.
Chiropractic yale mihla: I-chiropractor yale mihla idibanisa unyango oludibeneyo kunye nokusebenza kwemisipha kunye nokwenza umthambo ngokwezifiso.
Ukuba awuyi eklinikhi ukuya kuxilongwa kubuhlungu obuqhubekayo ethangeni elingaphezulu, ubeka umngcipheko. Nxibelelana nonyango ukuba uneentlungu ezingapheliyo ezingaphucukanga.
Siyathemba ukuba eli nqaku likunike ukuqonda okungcono kwezizathu ezinokubakho zentlahla ephezulu. Zive ukhululekile ukunxibelelana nathi okanye usebenzise ibhokisi yezimvo engezantsi ukuba unemibuzo emininzi.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Vondt-i-låret.jpg?media=1648573622 431 650 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2018-06-18 17:42:242018-06-18 17:45:42Ubuhlungu ethangeni elingaphezulu: Unobangela, unyango kunye nokuthintela
Yoga inokuyifumana njani iFibromyalgia Uphando: Oku kunokuba sisizathu 'senkungu yefibro'